Tartan lagu xoojinayey nabadda iyo isdhexgalka Bulshada oo ka furmay Degmadda Hodan – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Tartan lagu xoojinayey nabadda iyo isdhexgalka Bulshada oo ka furmay Degmadda Hodan
Tartankaan isboorti oo ay ka qaybqaadanayeen Cayaartooy kala metelaysa waaxyaha kala duwan ee Degmadda Hodan ayaa galabta si rasmi ah uga furmay xarunta Degmadda Hodan ee Magaaladda Muqdisho.
Munaasabadii furitaanka Tartankaan oo ay soo qabanqaabisay Hey’adda Wacyegelinta Bulshada ee CCA ayaa waxaa ka soo qaybgaley masuuliyiin isugu jirtay Heer degmo iyo madax metelaysay Ururadda Bulshadda Rayidka ee ka howlgala Gobolka Banaadir.
Furitaankii Tartankaasi ayaa khudbad ay halkaasi ka soo jeedisay Guddoomiyaha Degmadda Hodan Marwo Xaawo Maxamuud Cali (Xaawo kiin) waxaa ay ku dheeraatay ka shekeynta faaiidada uu isboortigu u leeyahay isdhexgalka Bulshada iyo kor uqaadida nabadda, waxayna tilmaantay in qabashada tartankaan ay soo dhoweyneyso, iyadoo ay intaasi ku dartay in ay ka maamul ahaan ka go’an tahay sidii dhinaca isboortiga loogu mari lahaa wadada Nabadda.
Gudoomiyaha Degmadda oo hadalkeedi sii wadata waxay dhalinyaradda tartankaasi ka qaybqaadanayay kula dardaarantay in ay nabadda ka shaqeeyaan isla markaana ay u howlgalaan sidii ay uga caqli celin lahaayeen mid kasta oo la qalday, iyadoo dhinaca kale uga mahad naqday Hey’adda CCA qabashada tartankaasi.
Agaasimaha Hey’adda CCA maxamed Cabdi xasan(Sandheere) oo isna munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in tartankani uu socon doono dhowrka cisho ee soo socota,wuxuuna xusay in ay ka qaybqaadan doonaan in ku dhow ilaa iyo Laba boqol oo dhalinyaro ah oo ka kala socda waaxyaha Degmadda Hodan ee Gobolka Banaadir “Tartankan isboorti waa uu ka balaaran yahay tartamadii hore ee ay Hey’addu qaban jirtay, wuxuuna isugu jira tartamo kala duwan sida; kubadda Cagta (Fuutsalka), kubadda Koleyga, Kubadda Laliska, Orodada, Feerka, Xariq jiidka iyo kuwo kale” ayuu yiri Agaasimaha CCA oo intaasi raaciyey in gebagebada tartankan lagu bixin doono abaalmarino aad qaali u ah oo uu sheegay in la siin doono kooxaha kalimaha koowaad ka gala tartamadan.
Munaasabadii furitaanka Tartankaasi waxaa isna ka hadlay Gudoomiyaha Isboortiga Degmadda Hodan Maxamed Cabdi Maxamed ( Awdheere) oo ka war bixiyey qaabkii loo soo agaasimay tartankaasi iyo hanaanka uu ku socon doono tartankaas.
Kulankii ugu horeeyey ee lagu furay tartankaasi waxaa galabta isaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee waaxyaha Taleex iyo Oktoobar, waxaana 2 =1 ay guushu ku raacday wiilashii ku ciyaaarayey magaca Xaafada Oktoobar, halka berri lagu wado in ay garoonka degmadaasi ku kulmaan kooxaha xaafadaha Garasbaaley iyo Kacaan.
Dad weyne aad u fara badan oo u badnaa taageerayaasha labada xaafadood ee cayaarayey ayaa soo buuxdhaafiyay fadhiyada kala duwan ee garoonkaasi, iyadoo ay ku qaylinayeen ereyo ay ku taageerayaan hadba waaxdii ay ka socdaan.
Tartankani ayaa la filayaa in uu ka xiisa badnaan doono tartamadii horey u dhici jirey maadaama ay ka qaybqaadanayaan cayaartooy aad u fara badan , kuwaasi oo ku tartami doona qeybaha kala duwan ee isboortiga.
Bandhig faneed lagu noolaynayo dhaqanka iyo fanka oo ka dhacay Jowhar
Somali government detains social media imposters